Resources – Page6– GlobalNet
Q1. GlobalNet DIA (Dedicated Internet Access) က ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ Ans. Dedicated Internet Access (DAI) ဆိုသည်မှာ သီးခြား Fiber Cable Line မှ တဆင့် Customer Sites သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပေးထားသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Internet Provider နှင့် Customer sites ကြားတွင် တခြား မည်သည့် လိုင်းခွဲမှ ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့် တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်သော Internet bandwidth နှင့် မြန်ဆန်သော Data transfer rate ကို ထောက်ပံ့ပေးထားသော လုပ်ငန်းသုံး အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Q2.
GlobalNet Improved Performance And Efficiency of Services Peugeot Car Showroom (Myanmar) By Super Seven Star (SSS) Achieves 20% Performance Boost Running Online Using GlobalNet Fiber Connections. Objective To boost the Online performance for all activities of Peugeot Motor (Myanmar) Industry Auto Mobile Location Yangon & Mandalay Business Results Achieved 20%